विश्वका यी १० देश जहाँ घुम्न जानुपूर्व अपनाऊनुहोस विशेष सतर्कता - Jagaran Post
Home/विश्व/विश्वका यी १० देश जहाँ घुम्न जानुपूर्व अपनाऊनुहोस विशेष सतर्कता
विश्वका यी १० देश जहाँ घुम्न जानुपूर्व अपनाऊनुहोस विशेष सतर्कता
२०७५ चैत्र १२, मंगलवार १०:०८ गते
जागरणपोस्ट – घरदेखि टाढाको यात्रामा निस्किनु यौटा त्यस्तो पल हो, जसले हामिलाई भरपुर आनन्द मात्र मिल्दैन, सिंगो मनलाई नै प्रेमिल बनाईदिन्छ, मन चंगा भैजान्छ। विशेष गरेर अझ विदेश भ्रमणको संयोग केवल जिन्दगीकै अथाह खुशीको संगालो मात्रै होईन, तन र मनलाई पनि संसारिक सुखको त्यो विन्दुसम्म पुर्याऊने अवसर पनि मिल्दछ। आफ्नो देशसम्म घुम्न आऊने पर्यटकलाई विश्वका कुनैपनि देशले भगवानसरह मान्दछन, उच्च सम्मान एवं स्नेह प्रकट गर्दछन, मीठो आथित्यता प्रदान गर्दछन। बाह्य पर्यटक कै कारण विदेशी मुद्रा भण्डारणमात्र नभई आफ्नो देशको पर्यटन व्यवसायसंगै समग्र अर्थतन्त्रमा नै उल्लेख्य योगदान रहने हुनाले पनि विश्वका कुनैपनि देशमा पर्यटकलाई उच्च सम्मान मिल्नेगर्दछ। यद्यपि विश्वमा कतिपय यस्ता देशहरु पनि छन, जुन देशहरु तपाईंको भ्रमण रुचीमा सायदै पर्लान, तर ति देशहरुको बारेमा जान्नुभयो भने निश्चय नै एकपटक तपाईंले ति देशहरुको भ्रमण अवश्य गर्नुहुनेछ। आऊनुहोस, आज हामी त्यस्ता १० देशको बारेमा बताऊंदछौं, जुन देशहरु हाम्रो भ्रमण सूचीमा सायद पर्दैनन। तर ती देशको बारे संक्षिप्त जानकारी हासिल गर्नुभयो भने पनि तपाईंको मुड बदलिन सक्तछ।
उत्तर कोरिया आफैमा एक कडा नियमले बाँधिएको हुनाले पनि उसको विश्वभर चर्चा हुनेगर्दछ। आफ्नो देशभन्दा बाहिरका संचारमाध्यम, इन्टरनेट तथा सामाजिक संजालबाट पूर्णरुपमा विच्छेद रहेको उत्तर कोरियाले ईन्टरनेटको प्रयोग कसरि गर्दछ र कसरी वाह्य विश्वसंग जोडिएको छ त भन्ने आम जिज्ञासा नै रहेको छ। यद्यपि यो देशको भ्रमणपूर्व पहिल्ल्यै नै आफ्नो टूर प्याकेज बुक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यात्रा अवधिभर तपाईंलाई पुरै समय टुर गाईडको साथमा नै रहनुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ। नेपाल र उत्तर कोरिया बिच सिधै हवाई सम्बन्ध नभएका कारण तपाईंले चीनलाई ट्रान्जिट बनाऊनुपर्ने हुन्छ।
सऊदी अरब भ्रमणमा निस्किंदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले साऊदी अरबकै स्थानिय नागरिकको सहायता लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। भ्रमण बुकिङ्ग गर्नुपूर्व नै यसवारेमा ख्याल राख्नुहोस र ट्रावल एजेन्सीलाई नै स्थानिय गाईडको व्यवस्था गर्न भन्नुहोला। नत्र साऊदीको कानुनी झमेलामा पनि पर्न सक्नुहुनेछ। साऊदी अरबको भिसा प्रक्रिया धेरै नै कडा भएकाले साऊदी अरबको भ्रमण योजनामा ५०% मात्र सफल हुने सम्भावना रहेकाले तपाईंले साऊदी अरबलाई पर्यटक अनुकुल नभएको देशको रुपमा सोंच्न बाध्य हुनुहुनेछ।
सन् १९७९ मा अमेरिकी दूतावासलाई बन्धक बनाएको ईरानमा त्यसयता विभिन्न बाहानामा अमेरिकाद्वारा प्रायोजित निरन्तर आक्रमण र चलखेलका कारण राजनैतिक संकट गहिरिंदो छ। नेपाल र ईरानबिच सिधै दौत्य सम्बन्ध नभएका कारण यदि तपाईं ईरान भ्रमणमा निस्किन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पाकिस्तासंग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र पाकिस्तानलाई ट्रान्जिट बनाएर ईरान पुग्न सक्नुहुन्छ। तर, तपाईं एक्लै ईरानको यात्रा भने गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं सामुहिकरुपमा यात्रामा निस्किनुपर्ने हुन्छ। पाकिस्तानी दुतावासद्वारा भिसा प्रमाणिकरणपश्चात तपाईं सामुहिकरुपमा ईरान भ्रमणमा जान सक्नुहुनेछ। तर ख्याल राख्नुहोस, यदि तपाईं एक्लै ईरान भ्रमणमा जाने सोंच बनाऊंदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो र बोझिलो हुनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र क्युवाबिचको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण क्युवाको राजनिति पनि संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकाले पनि क्यूबाको भ्रमण पनि त्यति सहज त हुनेछैन, तर असम्भव भने छैन। तपाईं आधिकारिक निकायद्वारा प्रायोजित या अवकाश पश्चातको भ्रमण योजनामा समेल हुन सक्नुहुनेछ। तर, तपाईंलाई यसको प्रक्रियामा धेरै समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै तपाईं नेपाल, कतार, अमेरिका हुँदै क्युवा पुग्नुपर्ने झन्झट पनि छ।
सिरिया आन्तरिक राजनैतिक कलहको कारण बाह्य हस्तक्षेपको चपेटामा पुगेको छ। सिरियाको शन्तिसुरक्षा अत्यन्तै नाजुक पनि रहेको छ जसले गर्दा तपाईंको यात्रालाई जोखिमपूर्ण पनि बनाऊँदछ। तर तपाईंले सिरिया भ्रमणमा जान खोज्नुभएको छ भने निश्चिन्त हुनुहोस सिरियाको भिसा प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै छ। सिरियाको भिसा प्राप्त बहुतै गाह्रो छ। अधिकतम पर्यटकलाई सिरियामा भिसा दिन अस्विकार गरिएको पनि छ। सिरियाको चर्कंदो गृहयुद्ध र फैलिंदो अशान्तीका माझ तपाईंले भ्रमणको दुस्साहस नगरेकै राम्रो।
सोमालिया समुन्द्री चोरहरुको आतंकका कारण बदनाम देश हो। सोमालिया आऊने पर्यटक सितिमिति समुन्द्रतर्फको भ्रमण गर्दैनन। ठूला ठूला मालवाहक जहाजदेखि लिएर यात्रुवाहक जहाज सोमालियाका समुन्द्री डाँकुहरुको कब्जामा पर्ने गरेका छन। यो देशमा यात्रा गर्नको लागि सम्बन्धित देशको सरकारको आधिकारिक अधिकारिको स्विकृति र सुरक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। सकभर सोमालियाको यात्रा नगरेकै वेश ! यदि तपाईंलाई समुन्द्री डाँकुको सामना गर्नुछ भने सोमालियाको यात्रामा निस्किनुहोस, अन्यथा सोमालिया भ्रमण नगरेकै वेश !
यो देशसंग अधिकांश देशहरुको कुटनैतिक सम्बन्ध छैन। यो देशमा घुम्न जान ईच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईंले फ्रान्सको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। फ्रान्स हुँदै यो देशमा घुम्न जान सकिन्छ।
अफ्रिकी देश अंगोलाको यात्रामा निस्किनु पनि चानचुने कुरा होईन। यो देशको भ्रमणमा निस्किनुपूर्व तपाईंले अत्याधिक पैसाको जुवाड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उडानपूर्व नै अंगोलाको आमन्त्रण शुल्क, भिसा रकम, आवेदन रकम सवै एकसाथ डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनाले तपाईंको यात्रालाइ झन्झटिलो र महंगो बनाईदिन्छ। अत्याधिक महंगी रहेको यस देशको भ्रमणमा छुट्ट्याएर राखेको बजेटले नपुग्न पनि सक्तछ।
लिविया भ्रमण बिना भिसाको जाने तरिका पनि छन तर अत्यन्तै जोखिम मोलेर। राजनैतिक अस्थिरता र युद्धको चपेटामा परेको लिविया जोखिममुक्त भने अवश्य छैन। भिसा प्रक्रिया भने सहज रहेको यस देशको भ्रमणपूर्व भने सोंच्नैपर्ने हुन्छ। पर्यटकको सुरक्षामा लिविया सरकारले खासै चासो देखाएको छैन।
अल्जेरिया घुम्नुपूर्व खर्चको लागि थोरै पैसाको जुगाडले पुग्दैन। होटल बुक गर्नुपूर्व तपाईंलाई यौटा प्रमाणपत्र को पनि आवश्यकता पर्दछ। नेपालबाट तपाईं घुम्न निस्किने सोंचमा हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित ट्रावल एजेन्सीद्वारा अल्जेरियाको ट्रावल एजेन्सीलाई आमन्त्रणको रिक्वेष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कारण तपाईंलाई भिसायोग्य बनाऊनु हो।अल्जेरिया एक पर्यटकिय गन्तव्य पनि हो।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसन ले : कितना अच्छा है मोदी लेखेपछी
२०७६ असार १४, शनिबार १२:०५ गते
पेरुमा एकै समय बलि दिईएका २२७ बालबालिकाको कंकाल भेटियो
२०७७ भाद्र २७, शनिबार ०२:३७ गते
२०७५ चैत्र १, शुक्रबार ०७:१३ गते
चीनले भन्यो- वुहानमा कोरोना फैलिनुमा अमेरिकी सेनाको हात
२०७६ फाल्गुन ३०, शुक्रबार १७:११ गते
२०७५ चैत्र ४, सोमबार ११:१६ गते